Lehilahy iray tratra nitoraka grenady
Grenady iray no nipoaka teny Mandrosoa, omaly tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany. Taorian’izay dia nisy nanipy grenady ihany koa teny akaikin’ny tobin’ny zandarimaria Ankadilalana. Omaly alina dia grenady hafa ihany koa no nipoaka teny Andohalo. Tsy nisy naratra na aina nafoy anefa tamin’ireo rehetra ireo. Tovolahy iray no voasambotra teny Mandrosoa.
« Niverina teo an-toerana ilay tovolahy rehefa avy nitsoaka nanipy ilay grenady. Olona iray teo an-toerana no nahatadidy azy ary avy hatrany dia nanoro azy ny mpitandro ny filaminana. Mbola saika hitsoaka ihany izy, saingy nifandrimbonan’ny olona ny fisamborana azy », hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny polisim-pirenena.
Tranona kolonely iray ao amin’ny Toby miaramila RM1 no fantatra fa nokendrena tamin’ny fanipazana grenady teny Mandrosoa ity, araka ny fantatra teny anivon’ny mpitandro ny filaminana ihany.
Lasibatra ny tobin’ny zandary
Ora vitsy taoriana’izay, tokony ho tamin’ny 4 ora tolakandro kosa no nitrangany teny Ankadilalana. Nisy nitoraka grenady ihany koa tsy lavitra ny tranona kolonely zandary iray. Nipoaka ilay grenady saingy soa ihany fa tsy nandratra na namono olona. Na izany aza, mahavariana ihany raha eny akaikin’ny tobin’ny zandary izay misy ireo miaramila « mpioko » teny Ivato no misy mahasahy mitoraka grenady tahaka izao.
Afak’omaly alina dia nisy grenady iray nipoaka ihany koa teny amin’ny tohatoha-bato hiakatra eny Anatirova. Tokony ho tamin’ny 9 ora alina no nisian’izany ary tsy nisy naratra na zavatra simba tamin’ity fipoahana ity.
Andro vitsy lasa izay dia miverina indray ity fanapoahana grenady ity teto an-drenivohitra. Ny toby fivarotana solika eny Tsiazotafo no napoakan’ireo andian’olona voalohany. Tsy nisy tratra tamin’izany fa nanomboka teo dia niitatra izany ary lasa grenady tena izy mihitsy no ampiasain’ireo manao izany.